2. Yingani kuthiwa abefundisi bezenkolo nabadala bonke bahamba umgudu wobuFarisi? Yini umongo wabo? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Abanye abantu bathanda ukubukwa. Ngenkathi kukhona abafowabo nodadewabo, bathi bayambonga uNkulunkulu, kodwa uma bengaboni, abalenzi iqiniso futhi benza ngendlela ephambene ngokuphelele. Ingabe abayibo abaFarisi benkolo? Umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu futhi oneqiniso yilowo othembekile kuNkulunkulu, kodwa engakwembuli obala lokho. Uzimisele ngokwenza iqiniso lapho kuvela izinkinga futhi angakhulumi noma enze ngendlela ephambana nonembeza wakhe. Ukhombisa ukuhlakanipha lapho izinkinga zivela futhi ubambelele emgomweni ngezenzo zakhe, noma ngabe izimo zinjani. Umuntu onjengalona osebenza ngeqiniso. Kunabanye abakhuluma ngezindebe zomlomo ngokumbonga kwabo uNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo bebuthe izinhlonze ngokukhathazeka, babe nesimo sokuzenzisa futhi benze sengathi banobuso obunosizi. Kwaze kwenyanyeka! Uma nje ubungambuza, “Iziphi izindlela ombonga ngazo uNkulunkulu? Ngicela ungitshele!” ubeyophelelwa ngamagama. Uma uthembekile kuNkulunkulu, ungakhulumi-ke ngakho ngaphandle; kunalokho, khombisa ukuthanda kwakho uNkulunkulu ngokwenza ngokoqobo, futhi ukhuleke Kuye ngenhliziyo eneqiniso. Labo abasebenzisa amazwi kuphela ukuze babhekane noNkulunkulu bonke bangabazenzisi! Abanye bakhuluma ngokumbonga uNkulunkulu ngomkhuleko ngamunye, bese futhi beqala ukukhala ngaso sonke isikhathi lapho bethandaza, ngisho ngaphandle kokuqhutshwa nguMoya oNgcwele. Abantu abanjengalaba bangenwe amasiko nemicabango yenkolo; baphila ngalawo masiko nemicabango enjalo, bahlale bekholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyamjabulisa uNkulunkulu, nokuthi ubungcwele bokuzenzela noma izinyembezi zokuzidabukisa ziyilokho uNkulunkulu akufunayo. Ingabe yikuphi okuhle okungaqhamuka kulaba abangasile? Ukuze bakhombise ukuthobeka kwabo, abanye babo benza sengathi banomusa uma bekhuluma kukhona abanye. Abanye bayazithoba ngamabomu uma kukhona abanye, njengezinyane lemvu elingenamandla nhlobo. …
Injongo yokubonakala kukaNkulunkulu ngaphandle komngcele wendlela ethile noma izwe ukuthi akwazi ukuqeda umsebenzi wesu Lakhe. Isibonelo, uma uNkulunkulu aphenduka waba yinyama eJudiya, injongo Yakhe kwakukwenza umsebenzi wokuqothula ukuze ahlenge isintu. Kodwa amaJuda ayekholelwa ukuthi ngeke ayenze leyo nto uNkulunkulu, futhi acabanga ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu angaba yinyama abe nguJuda iNkosi uJesu. “Okungenakwenzeka” kwabo kwaba isisekelo sokuthi bajezise futhi baphikisane noNkulunkulu, futhi ekugcineni kwaholela ekumoshakaleni kwe-Israyeli. Namuhla, abantu abaningi benze iphutha elifanayo. Bafuna ukwamukela ukubonakala kukaNkulunkulu, kodwa futhi bajezisa ukubonakala kwakhe; “okungenakwenzeka” kwabo futhi kubamba ukubonakala kukaNkulunkulu emikhawulweni yemicabango yabo. Futhi ngibone abantu abaningi behleka bewa abawahleka usulu amazwi kaNkulunkulu. Ingabe lokhu kuhleka akuhlukile yini ekujeziseni kanye nokuthukana kwamaJuda? Awuzinikele ekubhekaneni neqiniso, ingasaphathwa eyokulangazelela iqiniso. Ufunda njengempumputhe nje futhi ulinda ngokunganaki. Uzozuzani ngokufunda kanye nokulinda kanje? Ungazithola yini iziqondiso zikaNkulunkulu?
Kucashunwe embhalweni othi “Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Amadimoni nemimoya emibi bekulokhu kudlebelekile emhlabeni futhi kuvimbe intando kanye nomzamo kaNkulunkulu onokucophelela, kukwenza kungangeneki. Yisono esibulalayo leso! Angahlala kanjani angakhathazeki uNkulunkulu? Angahlala kanjani angathukutheli uNkulunkulu? Awuphazamisa kakhulu futhi amelene kakhulu nomsebenzi kaNkulunkulu. Ahlubuka ngokwedlulele! Ngisho nalawo madimoni amakhulu namancane aziqhenya kakhulu ngenxa yodeveli abanamandla bese eqala ukuzigqamisa. Aliphikisa ngamabomu iqiniso, naphezu kokulibona ngokucacile. Amadodana okuhlubuka! Kusengathi, manje njengoba inkosi yawo yesihogo yehlele esihlalweni sobukhosi, aba nokuzithwala bese edelela bonke abanye. Mangaki afuna iqiniso nalandela ukulunga? Onke ayizilwane njengezingulube nezinja, ahola iqembu lamabhungane anukayo ebulongweni ukuze anikine amakhanda awo bese esusa uthuthuva. Akholwa ukuthi inkosi yawo yesihogo inkulu kunawo wonke amakhosi, engaboni ukuthi awazidluli ngalutho izimpukane ezibhuza ekudleni okubolile. Akukhona nje lokho kuphela, akunyundela ngonya ukuba khona kukaNkulunkulu ngokuthembela kubazali bawo abayizingulube nezinja. Njengezimpukane ezincane, acabanga ukuthi abazali bawo bakhulu njengemikhoma enamazinyo. Acishe angazi ukuthi, lapho kwawona emancane, abazali bawo bayizingulube nezinja ezingcolile ezinkulu ngokuphindwe ngezigidi ezingamakhulu kunawo. Engakuboni ukuba phansi kwawo, ayadlebeleka ngephunga elibolile lalezo zingulube nezinja futhi anombono onokuzikhohlisa wokuzala izizukulwane ezizayo. Lokho ukungabi namahloni kakhulu! Ngezimpiko eziluhlaza emhlane (lapha kubhekise kokushiwo yiwo ukuthi akholwa kuNkulunkulu), aqala ukuziqhenya futhi ahambe eqhosha ngobuhle bawo, efaka ngesinyelela ukungcola kwawo kumuntu. Futhi aba nokuzithwala, kube sengathi amaphiko amabili anemibala yothingo lwenkosazane angakufihla ukungcola kwawo, futhi ngalezi zindlela, acindezela ulwazi mayelana nokuba khona kukaNkulunkulu weqiniso (lapha kubhekiswe kulokho okwenzeka ekusithekeni emhlabeni wenkolo). Kuncane umuntu akwaziyo ngokuthi, nakuba amaphiko empukane emahle futhi eheha, empeleni ayehluke ngalutho empukaneni encane egcwele ukungcola futhi embozwe amagciwane. Emandleni abazali babo abayizingulube nezinja, adlebeleka kulo lonke izwe (lokhu kubhekise ezikhulwini zenkolo ezishushisa uNkulunkulu ngenxa yokwesekwa kakhulu yizwe elikhaphela uNkulunkulu weqiniso neqiniso) ngolaka olukhulu. Kuba sengathi izipoki zabaFarisi abangamaJuda zibuyele kanye noNkulunkulu ezweni likadrako omkhulu obomvu, esidlekeni sazo esidala. Aphinde aqala esinye isiwombe sokushushisa, ephinde eqhuba umsebenzi wawo wezinkulungwane eziningi zeminyaka eyedlule. Leli qembu lezonakali nakanjani lizogcina libhubhile emhlabeni! Kubonakala sengathi, ngemva kwezinkulungwane eziningi zeminyaka, imimoya engcolile ikhohlisa futhi inobuqili kakhudlwana. Ihlale icabanga ngezindlela zokudicilela phansi ngokuyimfihlo umsebenzi kaNkulunkulu. Inobuqili nokuphamba futhi ifisa ukuphinda inhlekelele yeminyaka eyizinkulungwane eziningi ezweni layo. Lokhu kucishe kwenze ukuba uNkulunkulu amemeze kakhulu, futhi ukuthola kunzima ukuthi azithibe ekubuyeleni ezulwini lesithathu ukuze ababhubhise.
2. “Imikhoma enamazinyo” isetshenziselwa ukuhlekisa. Kuyisingathekiso wendlela izimpukane ezincane ngayo ngangokuba izingulube nezinja zibonakala zizinkulu njengemikhoma kuzo.
Okwedlule: 1. Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?
Okulandelayo: 3. Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?
2. Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:“Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele” (UMathewu: 4:17).“Wayesevula ukuqonda kwabo, ukuze baqonde...